केपी ओलीलाई धन्यवाद ! - NepalDut NepalDut
कोभिडले देश ठप्प, १० जिल्लामात्र खुला
ओलीलाई अर्काे धक्का, जसपाले मत नदिने
राजीनामामा पृथ्वीसुब्बाको आक्रोश : पहिले सरकारमा बस्ने, अहिले बन्चरो हान्ने
गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको राजीनामा
एमालेकै कारणले सरकार ढल्ने संकेत, नेपाल समूहको राजीनामा तयार
केपी ओलीलाई धन्यवाद !
खेम थपलिया काठमाडौं
पौष ५ गते २०७७
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि नेपालको शासन व्यवस्थामा वास्तविक अर्थमा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व थिएन । संसद् र सरकारमा केवल शक्तिकेन्द्रका नोकर–चाकर मात्र थिए । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूमा गुप्तचरहरू झनै भरिभराउ हुन थाले । त्यसैले, हामीले २०७० र २०७४ सालको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थियौँ ।
यहीबिचमा केपी ओलीले कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाए । ओलीले करिब एकदर्जन नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या गरे। झुट्टा मुद्दामा हजारौँ नेता तथा कार्यकर्ता अहिले पनि जेल तथा हिरासतमा हुनुहुन्छ । हामीले पनि पटक–पटक हिरासतको चिसो छिंडीमा कुँजिनुपरयो । हामीले भनेकै थियौँ कि यो व्यवस्था र केपी ओली जति दिन रहिरन्छन, उति नै देश र देश र जनताका लागि घाटा हुन्छ ।यतिबेला ‘इन्डो–सीआईए’ को प्रत्यक्ष डिक्टेसनमा ओलीले दलाल संसदीय संसदको विघटन गरेका छन् । अब ओलीको विकल्पमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम वा शेरबहादुर हुन सक्तैनन् ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा उही मरणासन्न संसदीय व्यवस्था हुनै सक्तैन ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेको छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा उही मरणासन्न संसदीय व्यवस्था हुनै सक्तैन । अब दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था मात्र हुन सक्तछ । ‘नकारात्मक’ भूमिका लागि केपी ओलीलाई मुरी मुरी धन्यवाद ! अब संसदको पुनर्स्थापना हैन, वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति लागिपरौँ । यो महान् जनयुद्धको सपना पूरा गर्ने अवसर पनि हो । देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरू एकजुट बनौँ । आउनुहोस्, एकीकृत जनप्रतिरोधी आँधीबेहेरीको सातुसामल जोडौँ ।
कोरोना संक्रमित मेयरको अस्पतालमा मृत्यु
विद्यार्थी बलात्कार अरोपमा शिक्षक पक्राउ
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा पुग्यो ३४ कोरोना संक्रमित
नेपाली राजनीति : पुरानो किताब, नयाँ गाता
बिल गेट्सको सम्बन्धविच्छेद
विमानस्थलबाट डेढ किलो सुनसहित ५ पक्राउ
मुस्ताङ प्रशासनको नियमित सेवा बन्द
मनाङमा पनि भेटिए कोरोना संक्रमित
गायक प्रकाश सपुत होम आइसोलेसनमा